China Vanity napetraka miaraka amin'ny mpanamboatra efijery fitaratra fitaratra | Yifan
Ny vatasarihana fitehirizana roa dia manome toerana ho an'ny borosy, makiazy, moisturizer ary maro hafa.
Ny famolavolana peratra tantera-tanana dia manamora kokoa ny famadihana vatasarihana.
TOETOETRA Fitehirizana, vatasarihana, fitaratra LED
DIMENSION TABLE 800mmL x 400mmW x 750mmH
Ny fitaovana MDF dia mahatonga ny tampon'ny latabatra fisoloana akanjo ho malefaka sy mora diovina. Ny takelaka fotsy miaraka amina endriny volamena matevina dia toa tsara sy maoderina, toy ny fanaka tsotra sy kanto, mety tsara ho an'ny efitranonao. bara mpanohana sy bara mitsangana roa eo amin'ny farany ambany dia afaka manamafy ny filaminana. Safidy fanomezana lehibe ho an'ny zazavavinao amin'ny Andron'ny mpifankatia, Fetin'ny Reny ary fitsingerenan'ny andro nahaterahana.
Izy io dia mameno amin'ny fitaratra LED boribory eo ambony mba hahafahanao maka topy maso ny fisaintsainanao, ary hanjary ho mora kokoa rehefa manamboatra ianao. Namboarina tamin'ny fitaratra manjavozavo amin'ny efijery, ny dresser dia ahafahanao manao makiazy na dia ratsy aza ny jiro. Misy fomba fanazavana telo ny natiora, mafana sy mangatsiaka hisafidiananao. Ny jiro malefaka dia hanampy tsara ny vatanao ary tsy hahatsapa ho manjelanjelatra mihitsy ianao. Satria vita amin'ny akora kilasy P2 izy dia hisy fofona manitra kely kokoa izay mahatonga anao harary.
Ny vanity napetraka vita amin'ny volamena mahavariana, mifanaraka tsara amin'ny tampon'ny latabatra hazo fotsy sy ny fitanana vita amin'ny hoditra. Miaraka amin'ny ranjony miloko marevaka sy ny tsipika madio, ny latabatra fiakanjoana ankehitriny sy tsara tarehy dia fanampiny amin'ny efitrano fatoriana rehetra. Ny vatasarihana tsy mitongilana dia manome tahiry ilaina ary ny fitaratra boribory no toerana mety indrindra handavorariana ny volonao sy makiazy.
Ity latabatra fiakanjoana ity dia azo apetraka ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fandriana, na aiza na aiza no tadiavinao, izay afaka manome ny haingo fanaka tsara indrindra ho an'ny tranonao.
MATERIAL: White + GoldMaterial: E1 board grade board + vovoka metaly mifono vovoka
Previous: Latabatra makiazy tongotra tongotra
Manaraka: YF-T3 feno latabatra fisoloana akanjo maoderina
YF-T17 tonga lafatra ho an'ny toerana kely latabatra Vanity